musha nyika dzakabatana NFL Vatambi Julio Jones Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
CB inopa Nyaya Yakazara yeAmerican nhabvu Genius anozivikanwa kwazvo nezita rekuti ""The Silent Assassin“. Yedu Julio Jones Childhood Nhau pamwe neS Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yeakajeka zviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino. Kuongorora kunosanganisira hupenyu hwake hwepakutanga, nhoroondo yehupenyu pamberi pemukurumbira, nhoroondo yemhuri uye hupenyu hwega. Zvikuru zvakadaro, zvimwe OFF uye ON-Screen zvishoma-zvinozivikanwa chokwadi nezvake.
Hongu, munhu wose anoziva iye ndomumwe wevanogamuchira zvakanyanya NFL. Zvisinei, vashoma chete ndivo vanofunga nezveJulio Jones 'biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Julio Jones Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts: Upenyu Hwekutanga uye Mhuri
Kutanga kubva, Quintorris Lopez "Julio" Jones akazvarwa musi we 8th waFebruary 1989 paFoley muAbama, USA. Akanga ari wechipiri akaberekerwa kubatana pakati pebaba vasingazivikanwi nezvake uye amai vake vaMambo Marvin (mushandi pakudya kwekudya kwekutsanya).
Nezvemhuri yake, Jones ndeyeAmerican National of African-American madzinza nemaAfro-America midzi. Achikura munzvimbo dzechisimba dzeFoley pamwe nemukoma wake mukuru Philip, vaduku Jones vakashandura kuti vararame pasina baba vavo mushure mokunge baba vake vabva mumhuri paaiva nemakore 5 chete.
Kuregererwa kwakava nguva yekutsvaga basa raJones uyo akazvitora kuti ave mukana wekudya weamai vake nehanzvadzi yake.
"Akandiudza pazuva iro baba vake vakasiya, paakanga ava nemakore 5, kuti zvose zvaizova zvakanaka. Aizove mutambi wemutambo uye zvose zvaizova zvakanaka kwatiri. "
Akayeuka Jones Amai, Mambokadzi Marvin kuU.SA Nhasi MITIMA.
Kune rake divi, amai vaJones vakaita zvese zvavaigona kuriritira vanakomana vavo vaikurumidza kukura uye kuvadzivirira kuti vasakanganiswa nehuipi munzvimbo yavo.
"Akanga akaoma, asi aingoedza kundidzidzisa kubva pane zvakaipa. Nharaunda yandakabva, kwaive nechisimba chakawanda uye vanhu vachitengesa dope. Akangoedza kundichengetedza zvakananga uye kundichengetedza-kutungamira. "
Zvakazarurwa Jones pakurerwa kwake.
VERENGA Matthew Stafford Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
Julio Jones Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts: Dzidzo neKubata Buildup
Nhoroondo yaJones inosanganisira dzidzo yake paFoley High School muAlabama. Ndichiri kuchikoro Jones aive mwana akanyarara ane zviito zvaitaura zvakanaka nezve kugona kwake kwemitambo.
Uyu wechidiki akanyora kubatanidzwa mubhodhi, nhamba, basketball nebhokisi kusvika pakukoshesa mudzidzi wake wechikwata chechikwata Clark Stewart. Mudzidzisi kazhinji aitarisa nekutya kwekuti Jones akaitamba sei mitambo asina kutora chikwata chake chakasviba nokuti vezera rake vakanga vasingagoni kumubata.
“Julio Jones aive nemakore gumi nerimwe ekuberekwa pandakamuti atange kuFoley High School. Aive mumwe wevana ivavo aive aine tarenda rekumhanya, nekumhanya, kuenzana uye nesimba. ”
Hazvina kutora nguva refu pamberi pekuzvipira kwaJones kunhabvu uye kutamba kwakanakisa mune yakagashira yekugamuchira uye yekudzivirira yekupedzisira kugona kwakamuona ave nyeredzi mutambi uye aive mu2008, akanyorwa seNhamba 1 yakagamuchirwa mutarisiri tarisiro munyika yese.
Paakapedza chikoro chesekondari, mutambi wenhabvu uyo ​​aimbojaira kunyoresa makorogi panguva yegore rake rekutsvaga akazvipira kuAlabama Crimson Tide. Izvi zvakatanga kushandiswa kwake kukuru munzira huru mukurumbira.
Julio Jones Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts: Road To Fame
Jones 'Koreji basa kuAlabama Crimson Tide rakasungwa nebasa rakaoma uye mubayiro wekubudirira. Akasvika paUniversity yeAlabama panguva iyo timu yayo yenhabvu yaive pazasi-nguva uye akabatsira kuchinja hupfumi hwayo nekubatsira divi rake kuhwina mukwikwidzi weSec West.
Kuita kwake hakuna kuenda kusingaonekwe nevateveri vasingaregi avo vaizotora chero mukana wekumubaya kuti aiswe maodha. Uye zvakare, akatumidzwa zita SEC Nyowani yeGore neAssociated Press uye akavhota kuAll-SEC Varairidzi 'Nhabvu Timu (timu yekutanga).
Julio Jones Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts: Simuka Mukurumbira
2011 yakanga iri gore rakavimbiswa uye rakapemberedzwa zvikuru Jones akapira nguva yake yakakura muAlabama nekuzivisa kubvumidzwa kweNFL draft. Akakwikwidzana akasarudzwa neAtlanta Falcons iyo yakatengesa zvigadziro zvishanu zvekutora kuitira kuti asarudze Julio seC6th inotanga mumutambo wokutanga.
VERENGA VaPatrick Mahomes Vechidiki Nhoroondo uye Untold Biography Facts
Nekukurumidza kumberi kusvika nhasi Jones akaratidzira kuFalcons kuti zvinyorwa zvake zvepamusoro uye zvekoreji zvaive zvisina kukaka nekuratidzira fomu yepamusoro uye hunyanzvi hunomuita mumwe weNFL akanyanya kugashira akagashira.
Julio Jones Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts: Ukama Hupenyu
Kunyangwe hunyanzvi hwaJones hwekutakura huri pachena, hukama hwehukama hwake hunosiya zvakawanda zvekufungidzirwa.
Pakave nemafungiro pamusoro pemakore kwete kungoziva kuti ndiani musikana wake asi wehutano hwake. Kunyange zvazvo kutsamwa kwekufungidzirwa uye mafungiro akasiyana naJonas haatombogadziri uye anoenderera mberi nekuchengetedza hupfumi hwake.
Julio Jones Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts: Upenyu hweMhuri
Jones akaberekerwa mumhuri ye4 tinokuudza mashoko echokwadi nezvemhuri yemhuri yake.
Nezve Baba vaJones: Chinyanyo kuzivikanwa pamusoro pababa vaJones avo vakasiya mhuri yavo apo Jones aive mashanu.
Nezve Amai vaJones: Mukadzikadzi Marvin ndiye amai vane hutsinye avo vakasimudza Jones nemukoma wake munharaunda dzechisimba zveForley. Marvin mubereki anoshingaira uye anotsigira uyo akapedza maitiro ake akanaka emabasa kuvana vake. Mukuwedzera, anobata vana vake mukuremekedza uye ane tarisiro yakakwirira kubva kwavari.
Marvin akatumidza Jones kuti "Quintorris" (zvichireva gladiator) nekuti aifunga kuti aizove musikana maererano naye:
"Chikonzero chandakamupa Quintorris ndechokuti vakandiudza kuti aizove musikana. Akanga asiri musikana, uye zita rangu ndiMambokadzi, saka ndinomurega ave naQuintorris chero. "
Marvin, zvisinei, akasarudza kushevedza mwanakomana wake Quintorris paakanga akwegura 12. Iye panzvimbo pacho akasarudza kumudana Julio uye zita racho rakaramba richibva ipapo.
Nezve Jones 'Sibling: Jones munun'una chete ndiye mukoma wake mukuru anonzi Philip. Idzo hama dzakakura senge risingapatsanurwe vaviri uye vachiri padyo kusvikira zuva naPhilip achienda mazhinji emitambo yaJones. Firipi anosuruvarisa mumwe-akasununguka nokuti ruoko rwake rworuboshwe rwakanga rwanyatsoputirwa mushure mokunge rakatambura ruchikuvadzwa kubva pfuti bhuti.
Firipi anozviitira zvose zvaanoshevedzwa nekusava neruoko rworuboshwe kuburikidza achiona Jones anoshandisa pachake pakuteerera bhora. Maererano naamai vavo Marvin:
VERENGA Tom Brady Mwana Wechiitiko Nyaya Dzimwe Untold Biography Facts
"Zvave zvakaoma kuti [Phillip] atarise. Paanotarisa kumashure uye ruoko rwake harusiko, zvakaoma sekunge zvaizove kune ani zvake uye zvakaoma kuti usadzike pamusoro payo. Zvakandiomera kuti ndizvione zvakare nokuti ndiye mwanakomana wangu. Asi apo Julio anotamba sekuti inomusimudza. Ivo ihama uye vaigara pamwe chete. Iwe unogona kuona zvaanoita kwaari apo Julio anoita kuti amhanya uye kubata kana chimwe chinhu chakadaro. Zvinomufadza uye zvinoita kuti isu tose tifare. Anokwanisa kuderedza kufara kwacho zvishoma, "
Julio Jones Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts: Untold Career Facts
Jones ane fomu yake yakasimudza uye kufanirwa kuonga kuburikidza nekuchera maitiro akawanda ekutsigira. Vanosanganisira avo vaakasaina ne Champs Sports, Chevrolet uye Finish Line. Zvimwe zvinosanganisira zvaanoita ne Under Under Armor uye Vita Coco.
Chikamu chemari inowanikwa kubva kune zvibvumirano uye kubvumirana kwechibvumirano neboka rake Falcons yakasimwa nemutambi webhola mu $ 200 mamiriyoni edzimba rekugadzira kunze kweAtlanta pakati pemamwe masimari.
Julio Jones Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts: Personal Life Facts
Jones ndiye munhu akaderera-kiyi munhu asingatauri kutaura kana kupinda mune zvisiri izvo asi anotonga mutsara wake. Akatumidza zita remhondi, Jones ane chinyorwa chikuru che gladiator kuti afanane nezita rake Quintorris. Muitiro wake unosanganisira kushanda kunze, Bowling uye hove.
Julio Jones Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts: Lifestyle
Jones ane boka rinotyisa remotokari kuratidza semubairo wekuzvipira kwake kumabasa. Dzinosanganisira Ferrari 458 spider Italia, Dodge Viper, Bentley, Porsche uye Audi R8.
Iyo motokari yemoto inodzivirirwa muimba yake yakanaka uye yakaisvonaka inokodzera mamiriyoni emadhora kuBuyford Atlanta.
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Julio Jones Childhood Story pamwe chete biography nhoroondo. At biography yemwana, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!
Mhoro zita rangu Lane Moore Ndiri kuyedza kutsvaga kana ari iyeye Julio wandakadzidzisa kubata nhabvu muKindergarten kuMiami Florida, ini ndaive chipangamazano wake muchirongwa cheYMCA, ndakatora Julio nevamwe vana 27 panze zuva rega rega kuti vadzidzise iye kubata nhabvu nekukanda kunokanda, akazova mubati wenhabvu mukurusa pazera re5years. Akatama kubva kunze kwenyika ini ndikabva ndasiyawo. Kana uyu ari iye mumwe mwana ndine chokwadi kuti anga achinditsvaga.